जथाभावी मास्क र पन्जा फालेमा ५०० युरोसम्म जरिवाना - VOICE OF NEPAL
230 ??? ???????
पछिल्लो समयमा जथाभावी फालिएका मास्क, पन्जा र पीपीइले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढाएको अनुसन्धानले देखाएको छ। त्यसपछि प्रयोग गरिएका मास्क, पन्जा र पीपीइको सुरक्षित डिस्पोज कसरि गर्ने र सुरक्षित डिस्पोज नगरे प्रयोगकर्तालाई कसरि उत्तरदायी बनाउने भनेर विभिन्न देशहरुमा नयाँ कानुनको अवलम्बन गरिएको छ।
कोरोनाले आक्रान्त बनेको इटालीले हालै मास्क, पन्जा र पीपीइको सिस्पोज सम्बन्धी कडा कानुन बनाएको छ। रोमको राजधानी इटालीमा जथाभावी मास्क, पन्जा र पीपीइ फालेमा कम्तिमा २० युरोदेखि ५०० युरोसम्म जरिवाना हुने कानुन लागु गरिएको छ। रोममा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि सो नियम बनाईएको हो।
इटालीको राजधानी रोममा जथाभावी मास्क र पन्जा फाल्नमा प्रतिबन्ध र फालेमा जरिवाना ३१ जुलाईसम्मका लागि लागु गरिएको छ।
रोम शहरका सडकहरुमा जथाभावी जथाभावी मास्क र पन्जा फालिएको भेटिएपछि कोरोना संक्रमणको सम्भाव्य न्यून गर्न सो नियम लागु गर्नु परेको मेयर भर्जिनिया रेग्गीले बतायका छन्। उनले भनेका छन् , ” प्रयोग गरिसकेपछि मास्क, पन्जा र पीपीइ अनिवार्य रुपमा सहि तरिकाले फोहोरको कन्टेनरमा राखिनुपर्छ।”
इटालीमा हालसम्म कोरोनाले २ लाख ३० हजार १५८ जना संक्रमित भएका छन् भने ३२ हजार ८७७ को मृत्यु भईसकेको पछिल्लो तथ्यांक छ।